Kwethulwe Uhlelo Lwabantwana i-Optimal Child Growth and Development – School of Nursing and Public Health
Kwethulwe Uhlelo Lwabantwana i-Optimal Child Growth and Development
Home » News » Kwethulwe Uhlelo Lwabantwana i-Optimal Child Growth and Development
Kusuka kwesobunxele: USolwazi Kesh Govender, uSolwazi Rajen Naidoo, uSolwazi Anil Chuturgoon kanye noSolwazi Deresh Ramjugernath.
Emizamweni yokushintsha ucwaningo ngokuqhamuka nezindlela ezintsha namagalelo azwakalayo, i-African Health–Saving Lives Research Flagship yaseNyuvesi YaKwaZulu-Natali yethule i-Optimal Child Growth and Development (i-OrCHID).
I-African Health Research Flagship, uhlelo olulodwa kwezine ezaqalwa zethulwa yiNyuvesi ngonyaka wezi-2018, ilawulwa wuSolwazi Quarraisha Abdool Karim, ongomunye wabacwaningi abavelele emhlabeni endimeni yesandulelangculazi nengculazi, ngokwesikhundla sakhe sokuba uMelekeleli Sekeleshansela: KwezeMpilo Zase-Afrika. Inhlosongqangi ye-African Health Research Flagship ukunciphisa izinto ezihamba phambili ekufeni kwabantu baseNingizimu Afrika nasezwenikazi lonke ngokuqhamuka nezindlela ezingasiza uhulumeni akhe amasu nezinqubo ezisebenzayo.
IPhini likaSekelashansela kwezoCwaningo, uSolwazi Deresh Ramjugernath, lithe: ‘Lolu hlelo (i-Optimal Child Growth and Development) olwethuliwe luthinta ngqo lokhu esikuhlosile singabezeMpilo Zase-Afrika. Sifisa ukubheka izinkinga ezikhona emphakathini ngokuqhamuka nezisombululo eziphusile. Ngokubambisana nabalingani bethu, lokho kungenzeka.’
Ngaphansi kwesihlokwana esithi: Building Thriving Communities through Risk Reduction from impacts of Nutrition, Environment and Social Constructs, uhlelo lwe-OrCHID lusanda kuxhaswa ngezigidi zamarandi ezi-2.5 ukwenza umsebenzi walo. Lolu hlelo luhlose ukwenza izinto eziningi, okubalwa kuzo ukusimama kwemizwa, izinhlelo zomsoco nezinhlelo zokudla ezivutshelwe eNingizimu Afrika, izinhlelo zokulekelela abazali nokwenziwa kwezinhlelo zomakhalekhukhwini abahlakaniphile ezizokwenza ukuthi imiphakathi iqonde ingozi yesimo sezulu esiguqukayo nokuthi ingayinciphisa kanjani ingozi. Ucwaningo olwenziwe ohlelweni lwe-OrCHID luzobheka izinto ezisemakhaya ezithinta indaba yokudla okunomsoco nezindlela ezehlukene zokukhulisa izingane, ikakhulu iqhaza likababa. Ngokwamaqoqo ocwaningo, kuzoba nencwadi yamaresiphi okudla kwasekhaya, kwenziwe nocwaningo lokuhlola i-Moringa Olifera, egcwele izinto ezenza ukudla kungasheshe konakale.
USolwazi Rajen Naidoo, ungoti kwezamaGciwane eMvelo waseSikoleni sezoBuhlengikazi nezeMpilo YoMphakathi nomele ithimba le-OrCHID, ubonge iNyuvesi ngendlela yayo entsha yokweseka umsebenzi wocwaningo. Ubalule ukuthi uhlelo luzogxila endleleni umphakathi okhulisa ngayo ingane – egxile endlaleni, umkhakha othinta ucwaningo ngofuzo, ukungcola nezomsoco. ‘Sifisa ukusungula ucwaningo oluzohlanganisa izinhlaka eziningi, esikhundleni sokuzihlukanisa, zibhekwe ngalodwa,’ kusho u-Naidoo.
USolwazi Anil Chuturgoon, ungoti wezolibofuzo nofuzo waseSikoleni Sezezifundo Zokuxilonga Imithi NokweLapha nosethimbeni le-OrCHID, ubonge i-UKZN ngokuxhaswa, wathi ubonga uyanconcoza nangethuba. Uzocwaninga izinguquko enganeni kusukela izwala nokuthi lezi zinguquko zikuthinta kanjani ukukhubazeka. ‘Kufanele siyeke ukubheka izisombululo eNtshonalanga, siqale sibheke ezwenikanizi (e-Afrika),’ kusho yena. ‘Sinazo izixazululo zezinkinga zethu, sinobuxhakaxhaka obusezingeni eliphezulu nabacwaningi abangakwenza lokhu,’ kwengeza yena.
I-OrCHID ihlela ukwenza lokhu ngokusebenzisa okubili kulokhu evele inakho, okuyi-Mother and Child in the Environment (i-MACE) eneminyaka ecela kweyisithuba ukubheka ukungcola kwemvelo nempilo yesifuba sengane kanje ne-SONKE (esenyakatho yaKwaZulu-Natali) egxile emiphumeleni kashevu ngemva kokuzalwa komntwana. Izingane ezevile kuma-300 ezingaphansi kwalezi zinhlelo zombili zizobamba iqhaza ezingeni lomntwana, unina, abazali, ikhaya nelomphakathi.
Amagama: ngu-Hlengiwe Khwela
Isithombe: ngu-Albert Hirasen